सार्वजनिक सवारीमा पनि नियम उल्लंघनः गाडीमा कोचाकोच यात्रु | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ७ आश्विन २०७७, बुधबार १६:५०
दराैँदी समाचारदाताः छ महिना लामो बन्दपछि यातायात सेवा प्रालिहरुले असोज १ गतेदेखि लामो तथा छोटो दुरीमा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । कोभिड १९ को महामारीबाट बच्ने उपायबारे यातायात मजदुरहरुलाई अभिमुखीकरण गरे ।
प्रालिको घोषणापछि सरकारले पनि यातायात सेवा सुचारु गर्ने निणर्य गर्‍यो । तर यातायात सञ्चालनका लागि बिभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षा नियमहरु अनिबार्य अवलम्बन गर्न निर्देशन गर्‍यो ।
अहिले यातायात सेवा सुचारु भएका छ, तर स्वास्थ्य सुरक्षा नियमहरु पालना भएका छैनन् ।
‘हामीले त बसमा एउटा सिटमा एक जना मात्र बस्ने, भाडाचाहिँ ५० प्रतिशत बढि तिर्ने भन्ने समाचार सुनेका थियौँ तर म सोतीबाट गोरखा बजार आएको बसमा सिट भरि यात्रु थिए । दुईतर्फको सिटको बीचको गल्लीमा खुट्टा राख्ने ठाउँ थिएन । भाडाचाहिँ ५० प्रतिशत बढि नै तिर्‍यौँ’, एक यात्रु दिपेश गुरुङ भन्छन् ।
मास्क नभएका यात्रुलाई बसका कामदारले मास्क पनि उपलब्ध गराएका तर महंगो मूल्य तिर्नु परेको उनले बताए । ‘एउटा मास्कको २० रुपैयाँका दरले पैसा लिएको देखियो’, उनले भने । हाइवेमा चल्ने सवारी साधनमा स्वास्थ्य सुरक्षा नियम अवलम्बन गरेको भेटिए पनि ग्रामीण यातायातमा यसको कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।
दरौँदी यातायात सेवा प्रालिका सञ्चालक मध्यका एक अञ्जन खत्रीले स्वास्थ्य सुरक्षा नियम उल्लंघन गरी सवारी चलाएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । यदि कसैले त्यस्तो गरेको भए सचेत गराउने बताए ।